Ingxelo ngeEntlanganiso zodliwano-ndlebe ukusuka 2-5 Oktobha 2000
1.1 Ukujongelwa phantsi kolwimi
Abantu abathetha iilwimi zemveli abazingci kwaye bengabonisi mdla kwiilwimi zabo. Ukungazinikeli kwabantu ekuphuculeni inqanaba leelwimi zemveli kukhokelela kukungathethwa kwezi lwimi kumakhaya ezithethi zazo. Abantu abalwimi zabo zisisiNgesi nesiBhulu abanankathalo bengaziboneli ntweni iilwimi zabanye abantu. Balindela ukuba izithethi zezinye iilwimi zithethe iilwimi zabo, isiNgesi nesiBhulu kodwa bona bengenzi zinzame zokufunda okanye ukuphucula inqanaba lezinye iilwimi.
1.2 Ukungakwazi ukufunda nokubhala
Ngenxa yokuba kungakhathalelekanga ukufundwa kweencwadi kwezinye iilwimi, abashicileli banengcingane yokuba akukho bathengi baneleyo, oku kunokwenza ukuba bangafumani mbuyekezo yemali ethi isetyenziswe ekushicileleni ezi ncwadi (ingakumbi iincwadi ezibhalwe ngeelwimi zemveli). Oku kukhokelela kunqongophalo lweencwadi okanye oovimba [umzekelo iincwadi ekufumaneka kuzo iinkcukacha ezithile njengoolwazi-lubanzi ( encyclopedias )]. Oovimba abanokusetyenziswa ngootitshala ekufundiseni banqongophele.
1.3 Ukulinganiselwa kwemali
Ukutolika, ukuguqulela nokushicilela ngeelwimi ezintathu kudla imali eninzi. Amaxesha amaninzi akubikho mali yaneleyo yokwenza imicimbi engxamisekileyo. Iintetho yeelwimi ezininzi iziindleko.
1.4 Intsebenziswano kwihlabathi
IsiNgesi sisetyenziswa njengolwimi lonxibelelwano kwihlabathi liphela, intsebenziswano kwihlabathi isoloko isetyenziswa njengesizathu sokukhuthaza ukusetyenziswa kolwimi olunye.
1.5 Ukungabinadla nokungazi ngentetho yeelwimi ezininzi
Ngenxa yokuba urhulumente engazi ukuba uza kuyilawula njani inkqubo yentetho yeelwimi ezininzi, akukho nto ayenzayo (engathethi nokuthetha ngayo) kwaye xa isetyenziswa, isetyenziselwa ukukhangeleka kakuhle kwezopolitiko. Amajelo eendaba nezikolo nawo akayikhuthazi engayibonakalisi intetho yeelwimi ezininzi. IsiBhulu siyasilela kwaSABC. Intetho yeelwimi ezininzi ijongwa njengenkqubo enobunzima nengenakusebenziseka.
1.6 Ukunqongophala kweetoliki nabaguquleli abaqeqeshwe kakuhle
Luya lucutheka unxibelelwano phakathi kwamaqela athetha iilwimi ezahlukileyo ngenxa yokunqongophala kwabaguquleli neetoliki eziqeqeshiweyo.Ukusetyenziswa kwabaguquleli abangaqeqeshwanga nokujongelwa phantsi komsebenzi wabaguquleli kwenza ukuba iinguqulelo zibe zezodidi oluphantsi. Ukuqeqeshwa kwabantu abasebenza ngolwimi kubalulekile. Izakhono zolwimi zabantu kufuneka ziphuculwe. Ukusetyenziswa kolwimi kumajelo eendaba (ingakumbi abafundi beendaba kumabonakude) makuphuculwe.Uhlobo lwesiNgesi olusetyenziswa kunxibelelwano lolodidi oluphantsi kakhulu. Ukusetyenziswa kakubi kolwimi neengxaki zonxibelelwano zinika inkampani okanye iqumrhu igama elibi. Uyilo lwesigama seelwimi ebezingathathelwa ngqalelo ngaphambili maluphuhliswe ukuze lusetyenziswe kuguqulo nakwimfundo(ingakumbi kwzibalo nenzululwazi).
2.1 Ubuchule bokufunda nokubhala
Abezopolitiko mabasebenzise iilwimi zabo kwiingxoxo zephondo nezepalamente, ukuze babengumzekelo. Kufuneka kufundwe ezinye iilwimi, amasiko nezithethe zabanye abantu umntu angacingeli ulwimi lakhe. Ukulinganiswa kweelwimi kuya kwenza ukuba umntu ngamnye azingce ngolwimi lwakhe, oku kuya kukhokhelela kukuba abantu bayeke ukulinganisa amasiko nezinto zaseMelika eziboniswa kumabonakude.Ukutshintsha-tshintsha kolwimi nokusetyenziswa kolwimi olungamkelekanga ngokwasemthethweni mazamkelwe.
2.2 Ubuchule bokufunda nokubhala babo bonke abemi (1)
Ababhali mababhale ngeelwimi zabo. Ubukho babantu abafunda okushicilelwe ngesiXhosa nesiBhulu kungenza ukuba kubekho iincwadi ezaneleyo kumathala eencwadi.
2.3 Imali eyaneleyo yentetho yeelwimi ezininzi
Abaxhasi bamakhaya baya kuba nobuchule bokufunda nokubhala okwaneleyo, oku kuya kwenza ukuba bakwazi ukukhuphisana kwezemali ngokulinganayo. Amagosa akwazi ukuthetha iilwimi ezininzi aya kuqinisekisa ukunikwa kweenkonzo ngokulinganayo ezibhedlela, ezinkundleni nakwamanye amaziko karhulumente.
2.4 Idathabheyisi yeenkcukacha ezinokwenza neelwimi ezinokujongwa xa ukuze bantu bakwazi ukuphendula imibuzo engolwimi (2)
2.5 Inkxaso yokuthethwa kweelwimi ezininzi
Ubuchule buya kukhuthazwa ngeelwimi neenkcubeko ezintathu. Imfundo eya kwenziwa ngoonomathotholo noomabonakude iya kunika abemi bephondo uqeqesho lolwimi, ingakumbi kubantu basemaphandleni abangenalo oluhlobo losasazo. Oku kuthetha ukuba abalufumani olu qeqesho.
2.6 Iitoliki nabaguquleli bolwimi abaqeqeshiweyo
Abasebenzi bolwimi abaqeqeshiweyo mabaguqulele konke okushicilelweyo kwiilwimi ezintathu. Makuphuhliswe iiprogramu zekompyutha ukuze zenze inguqulelo yolwimi. Uluhlu lwesigama olwamkelekileyo luya kuqala umsebenzi onokwenza nolwimi.
2.7 Umgaqo-nkqubo wolwimi kazwelonke oxhaswa ngenene ngurhulumente (3)
Izikolo maziqulunqe imigaqo-nkqubo yolwimi eya kwenza ukuba kufundiswe ngolwimi lomngqusho kude kufikelelwe kwinqanaba leyunivesithi. Umgaqo-nkqubo mawenze amalungiselelo ezinto ezifunekayo (umzekelo uguqulelo notoliko lolwimi) ukwenzela kusetyenziswe intetho yeelwimi ezininzi.
3. Izisombululo ezinokuba luncedo
3.1 Ukukhuthazwa kwentetho yeelwimi ezininzi ngamajelo osasazo neteknoloji
Amaphephandaba, amaphephandaba engingqi neenkonzo zosasazo mazibandakanye isiXhosa ukukhuthaza intetho yeelwimi ezininzi. Kuphakanyiswa iphephandaba elinamanqaku abhalwe ngeelwimi ezininzi. Makusetyenziswe iteknoloji ukunxibelelana noluntu luphela, umzekelo ukuqalwa kwe website yokwenza iinguqulelo zolwimi. Iteknoloji nezikolo mazisebenzisane. ISABC inganika uqeqesho ngeelwimi ezintathu kwaye iSebe leMfundo laseNtshona Koloni malisebenzise amajelo osasazo ukwazisa abantu ngenqanaba leelwimi ezintathu.
3.2 Ukuphuhliswa kwentetho yeelwimi ezininzi ngurhulumente
Umongameli makayeke ukunika intetho yakhe ngesiNgesi ,makayinike ngesiXhosa. Imiqondiso kaZwelonke namatye ezikhumbuzo mawabe namagama eelwimi ngeelwimi.
3.3 Iphulo nokubhengeza uphuhliso lwentetho yeelwimi ezininzi
Iinkonzo, urhulumente, namaqela opolitiko mawakhuthaze intetho yeelwimi ezininzi. Makwaziswe usuku oluya kuhlonitshwa nguzwelonkelo ukugxininisa ixabiso lentetho yeelwimi ezininzi.Kuthunyelwe ezikolweni abantu abayimizekelo ukwenzela bakhuthaze abantwana. Makugxininiswe ixabiso lolwimi njengesiphiwo senkcubeko kuqeqesho.
3.4 Ukuqala kunikwe ithuba amagosa akwazi ukuthetha iilwimi ezininzi
emisebenzini nokunika uqeqesho kwiilwimi ezintathu
Imigaqo-nkqubo yokuqesha mayikhuthaze intetho yeelwimi ezininzi kumacandelo karhulumente nawabucala. Uqeqesho kwintetho yeelwimi ezininzi malunganikwa emisebenzini kuphela, malunikwe nasezikolweni ukususela kumabanga 1-12. Ootitshala mabakwazi ukusebenzisa iilwimi ezininzi kwaye baqeqeshwe ngeelwimi ezintathu. Abaqeshwa mababhale uvavanyo lweelwimi ezintathu. Makuvuzwe abantu abakwazi ukusebenzisa iilwimi ezintathu ngezinto ezithile. Makusekwe ibhodi yoosozilwimi.
Makucelwe imali yenkxaso. Kufuneka kwenziwe amalungiselelo oqingqo-mali okukhuthaza intetho yeelwimi ezininzi. Makubekho imali yoqeqesho lolwimi nokufundiswa kwabaqeshwa nootitshala. Iiprojekti zoluntu mazizenzele imali zingalindeli inkxaso evela kurhulumente. Iimpawu ezalatha indlela nezaziso zoluntu mazenziwe zifane ukuze zikwazi ukusetyenziswa ngamaziko nemibutho.
Ukuqokelela idathabheyisi yezixhobo namaziko asebenza ngolwimi ukuze abaphandi bafumane iinkcukacha ezifunekayo
3.7 Iincwadana ezenzelwa abakhenkethi neempawu ezalatha indlela mazibhalwe ngeelwimi ezintathu (4)
3.8 Iinkqubo ezifundisa ubuchule bokufunda nokubhala
Makwenziwe iphulo lokufundisa abantu abadala ukufunda nokubhala. Amathala eencwadi oluntu mawaseke umgaqo-nkqubo oqinisekisa ukuba kufumaneka iincwadi zazo zontathu iilwimi ukukhuthaza abantu ukuba baqhele ukufunda.
3.9 Imigaqo-nkqubo yolwimi (5)
IKomiti yeelwimi yaseNtshona Koloni mayikhokhele ucwangciso lolwimi. Abazali mabaziswe kakuhle ngemicimbi enxulumene nolwimi ukwenzela ukuba bakwazi ukuthatha izigqibo ezinokwenza nemigaqo-nkqubo yolwimi ezikolweni.
3.10 Imidlalo yeqonga mayibhalwe ngazo zontathu iilwimi zaseburhulumenteni.
1 Intlanganiso ekuya kuqatshelwa kuyo (symposium) uphuhliso lweencwadi zabantwana oluya kuba mgoFebruwari 2001. Iinjongo zale ntlanganiso kukhupha uncwadi lwabantwana ngazo zonke iilwimi okuya kuba yinxalenye yelifa lemveli labantwana. Ukufumana ezinye inkcukacha ungaqhagamshelana neCentre of the Book.
2 Idathabheyisi yiprojekti eqalwe yiKomiti yeeLwimi yaseNtshona Koloni kwaye iNkonzo yeeLwimi yaseNtshona Koloni seyiqalise ukuqulunqa oku.
3 Urhulumente sele ewuqulunqile umgaqo-nkqubo wolwmi oyilwayo, kungaqhagamshelwana nePANSALB ngalo mbandela.
4 IKomiti yeeLwimi yaseNtshona Koloni iphanda le micimbi yomibini kwaye sele iqalile ukuthethana namqumrhu awohlukileyo.
5 Jonga kwixwebhu ekuxoxwa ngalo- uMgaqo-nkqubo woLwimi oyiLwayo waseNtshona Koloni elikhutshwe ngo-Agasti 2000 ovela kwiNkonzo yeeLwimi yaseNtshona Koloni.